“Waxaa jira malaayiin qof oo laga dhaadhiciyay in Biden uu yahay shuuci hanti-dhawr ah
16th November 2020 by Barre Leave a Comment
Mareykanka ayaa haatan waxaa horyaal hawl aad u weyn oo ah sidii wax looga qaban lahaa wararka aan xaqiiqada ku salaynayn ee kala qeybinaya shacabka dalkaasi, sida uu haatan sheegaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama.
Obama oo wareysi gaar ah siiyay BBC-da ayaa sheegaya in shacabka Mareykanka uu haatan aad u kala qeybsan yahay marka loo eego sidii uu ahaa afar sano ka hor inta uusan Donald Trump la wareegin xukunka dalka.
Waxa uu sidoo kale sheegay in doorashadii dahwaan lagu doortay Joe Biden ay tahay mid billow u noqon doonto in shacabka la mideeyo.
“Waxay qaadan doontaa wax ka abdan hal doorasho si wax looga qabto kala qeybsanaanta shacabka Mareykanka,” ayuu yiri Obama.
Waxa uu sheegay in mideynta shacab kala irdhoobay aanan loo deyn karin siyaasiinta oo kaliya balse loo baahan yahay buu yiri isbadal dhanka hoggaanka ahi iyo nin dadku ay is-dhageystaan “oo ay ku heshiiyaan waxyaabaha laga wada siman yahay ee xaqiiqada ku saleysan ka hor inta aan laga doodin” waxa laga yeelayo arrimahaasi.
Haseyeeshee Obama waxa uu rajo ka muujiyay aragtida iyo fikradaha jiilka soo socda, wuxuuna ku booqriyay dhallinyaradu in ay barbaariyaan rajadaasi mustaqbalka ee ah in dunidu ay isbadali doonto isla markaana ay qeyb ka noqdaan isbadalkaasi.
Sidee loo kala qeybiyay shacabka Mareykanka?
Carada iyo ciilka u dhaxeeya dadka Mareykanka ee deggan dhulka miyiga ah iyo kuwa kale ee deggan magaalooyinka, arrinta muhaajiriinta, caddaaald darrada sinnaan la’aanta, wararka aan xaqiiqada ku dhisnayn ee la faafinayo iyo runtii oo laga suulay ayuu Obama u aaneeyay kala qeybsanaanta shacabka dalkaasi.
“Haatan aad baan u kala qeybsannahay, dabcan in kabadan sidii aan ahayn markii ugu horreysay ee aan xilka madaxtinnimada u tartamayay sanadkii 2007-dii isla markaana aan ku guuleystay xilkaasi sanadkii 2008,” ayuu yiri Trump oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah oo soo mara taariikhda mareykanka.
Waxa uu kala qeybsanaanta shacabka sidoo kale u aaneeyay Trump oo uu sheegay “in uu doonayay in uu shacabka sii kala qeybiyo maadaama ay kala qeybsanaantaasi dani ugu jirtay siyaasaddiisa”.
Arrinta kale ee Obama uu kala qeybsanaanta shacabka Mareykanka u aaneynayo ayaa ah wararka been abuurka ahi ee intarneedka lagu faafiyo, iyadoo buu yiri marnaba aan “xaqiiqadu aan dan laga lahayn”.
“Waxaa jira malaayiin qof oo laga dhaadhiciyay in Biden uu yahay shuuci hanti-dhawr ah, kuwo laga dhaadhiciyay in Hillary Clinton ay qeyb ka tahay koox xun oo ku lug leh faraxumeynta carruurta,” ayuu yiri.
Arrinta uu u soo qaatay Clinton ayaa la xiriirta warar been abuur ah oo sheegayay in Hillary Clinton oo ka tirsan xibiga Dimuquraadiga ay maamusho koox carruurta ku faraxumeyso Washington.
Obama waxa uu sheegay in inta badan warbaahinta caadiga ahi ay saanddadii dambe billaabeen in ay wararka iska xaqiijiyaan si looga hortago wararka been abuurka ahi ee intarneedka lagu baahinayo, taa oo uu sheegay in wali aysan ku filnayn wax ka qabashada arrintaasi sababtoo ah buu yiri “beenta ayaa isla markiiba dunida qabsaneyso inta aan xaqiiqada dhabta ahi la ogaan”.
Waxa kale oo uu arrintan ku eedeeyay xaaladda nolaleed iyo tan dhaqaale ee shacabka Mareykanka ee sida sinnaan la’aanta sii kordheyso iyo farqiga dhaqaale ee u dhaxeeya dadka deggan dhulka miyiga ahi iyo kuwa deggan magaalooyinka.
Waxa uu intaasi ku daray in arrintaasi looga faa’iideystay in dadka la isaga horkeeno oo midba midka kale ku eedeeyo in uu isaga mas’uul ka yahay dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa nolaleed ee ay wajahayaan.
Muxuu ka yiri midab kala sooca iyo cunsuriyadda?
Obama waxa uu sheegay in cunsuriyadda midabka ku saleysan ay waligeed caqabad iyo magac xumo ku ahayd midnimada shacabka Mareykanka.
Waxa uu tusaale u soo qaatay dilkii George Floid oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta askar boolis ah oo caddaan ah, arrintaa oo indhaha caalamka ku soo jiiday Mareykanka iyo shakhsiyaad kale oo madow ah oo cunsuriyadda ka jirta Mareykanka ay galaafatay nolashooda.